E-Journal: ညီလေးသို့ပေးစာ(ရက် ၉၀-အဓိဋ္ဌာန် ၊ ငြင်းပယ်ခြင်းရဲ့အလှ)
ညီလေးသို့ပေးစာ(ရက် ၉၀-အဓိဋ္ဌာန် ၊ ငြင်းပယ်ခြင်းရဲ့အလှ)
မနက်ဖြန်ဆိုရင် ၂၀၀၈ ခုနှစ်ရဲ့ ချစ်သော စက်တင်ဘာဟာ ဘယ်သောအခါမှ ပြန်မဆုံနိုင်တဲ့ ခရီးကို အပြီးအပိုင် ထွက်ခွာသွားတော့မယ်။ နှစ်တစ်နှစ်မှာ (၁၂)လ ရှိတဲ့အနက် (၉)လတာ ကုန်ဆုံးကာ (၃)လသာ ကျန်တော့မယ်။ ပြက္ခဒိန်တစ်ခုရဲ့ လေးပုံပုံသုံးပုံဟာ ကုန်ဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် လေးပုံတစ်ပုံသာ ကျန်တော့တယ် ဆိုပါစို့။ ဒါဟာ ဒီကမ္ဘာပေါ်က လူသားအားလုံးအတွက် တူညီတဲ့ အမှန်တရားပါ။တန်းတူရည်တူ အခွင့်အရေးပါ။
အဲဒီတော့ မြန်မာပီပီ ရက်(၉၀)အဓိဋ္ဌာန် တင်ပြီး အဲဒီအခွင့်အရေးကို အသုံးချကြရအောင် ညီလေးရေ။ အတိအကျ ဆိုရင်တော့ အောက်တိုဘာ (၃)ရက်၊ သောကြာနေ့က စကြတာပေါ့။ အဲဒီနေ့က စရေတွက်ရင် ၂၀၀၈ အကုန် ဒီဇင်ဘာ(၃၁)ရက်အထိ ရက်(၉၀)ကွက်တိပဲ။ ဒီ ရက်ပေါင်း (၉၀)ဟာ အခု အသုံးချရင်ချ၊ မဟုတ်ရင် ဘယ်တော့မှ ပြန်မရမယ့် အခွင့်အရေးပါ။
ကဲ နှစ်အစမှာ ကိုကြီးတို့ချခဲ့တဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ၊ရာထားချက်တွေ ဘယ်လောက် အောင်မြင်ခဲ့ပြီးပြီလဲ၊ ဘယ်လောက်ပြည့်မီခဲ့ပြီးပြီလဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်
ဧကန်လှပ၊ ပြည့်စုံရလိမ့်” ဆိုတဲ့ “အမေရဲ့ အမှာ” နဲ့အညီ အခုကျန်တဲ့ ရက်(၉၀)ဟာ ကိုကြီးတို့ဘဝရဲ့ အကောင်းဆုံး သုံးလပတ်ဖြစ်စေရမှာ ကိုကြီးတို့ရဲ့တာဝန်ပါ။ အဲဒီအခါ မဟာဗျူဟာလိုတယ်။ နည်းဗျူဟာ လိုတယ်။
ပထမဦးဆုံးသော မဟာဗျူဟာကတော့ ---- အဲဒီတော့ ဒီရက်ပေါင်း (၉၀)လုံးလုံး “ဘူး”တစ်လုံးဆောင်ကြမယ်။ ငြင်းပယ်ခြင်းရဲ့ အလှကို ထွန်းလင်းပြကြမယ်။
ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားတဲ့ သူဆိုတာ စိတ်ဓာတ်အင်အားကြီးမားရတယ်။ အကြီးမားဆုံးစိတ်ဓာတ်အင်အားက “ခန္တီ”ဆိုတဲ့ တရားပဲ။ သူတစ်ပါးတွေကို သည်းခံဖို့ ဆိုတာကိုက ခက်လှပြီ။ ကိုယ်ကိုယ့်ကို သည်းခံဖို့ဆိုတာက ပါရမီရှိမှဖြစ်မယ်။ ပါရမီဆိုတာ ဖြည့်ကျင့်ယူရင်ရပါတယ်။ …..
ကိုကြီး ငယ်ငယ်က ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဆရာတက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်ရဲ့ “လေရူးသည် စာမတတ်ပါ”ထဲက စကားလေးတွေကို ကိုကြီးမှတ်မိသလို ပြန်ကိုးကားလိုက်တာပါ။ စာသားတွေကတော့ အတိအကျမဟုတ်ဘူးပေါ့။ လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၀) နှစ်လောက်က ဖတ်ဖူးတာဆိုတော့ သေချာ မမှတ်မိတော့ဘူး။ (အဲသည်စာအုပ်ကလေး ညီလေး ဖတ်ပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ မဖတ်ရသေးရင် ဖတ်ကြည့်ပါလား။)
ကိုကြီးတို့ ရက်ပေါင်း (၉၀)လုံးလုံး ငြင်းပယ်ကြမယ်။
ငြင်းပယ်ခြင်း၊ ငြင်းဆိုခြင်း၊ ဟင့်အင်း ဆိုတာ ကိုကြီးတို့ ကြွယ်ဝသမျှ ဝေါဟာရတွေထဲမှာ စွမ်အားအကြီးမားဆုံး စကားလုံးဆိုရင် မမှားပါဘူးကွာ။ ကိုကြီးတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာလူမျိုးတွေ ခါးဝတ်ပုဆိုးပမာ မြဲကြပါတယ်ဆိုတဲ့ ငါးပါးသောသီလတွေဟာ ငြင်းပယ်ခြင်းတွေချည်းပါပဲ။ ငြင်းပယ်ခြင်းဟာ အကန့်အသတ်တစ်ခုကို ချမှတ်ဖို့၊ နယ်နိမိတ်တွေကို ခိုင်မာစေဖို့၊ ညီလေးလုပ်မယ့်အရာတွေနဲ့ မလုပ်မယ့်အရာတွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ဖို့အတွက် အလွယ်ကူဆုံး စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။ ငြင်းပယ်ခြင်း (ဟင့်အင်း-ဆိုတာ) ညစ်နွမ်းတဲ့စကားလုံး၊ အနုတ်လက္ခဏာသဘောဆောင်တဲ့စကားလုံး မဟုတ်သလို၊ အတ္တဆန်တဲ့ စကားလုံးလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အတ္တ၊ ပရ နှစ်ဖြာအတွက် သန့်စင်သောစွမ်းအားရဲ့ စကားလုံးသာဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်အရာတွေကို၊ ဘယ်နေရာမှာ၊ ဘယ်လိုငြင်းပယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အနုပညာကို ညီလေး ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် အောင်အောင်မြင်မြင်ရှိဖို့ဟာ အလွန်အရေးပါပါတယ်။ ငြင်းပယ်တတ်အောင် သင်ယူလေ့လာခြင်းဖြင့် ညီလေးရဲ့ အဓိကဦးစားပေးတွေမှာ အာရုံစူးစိုက်နိုင်လာကာ ညီလေးရဲအချိန်တွေဟာ ပိုမိုလွတ်မြောက်လာမှာပါ။ အချိန်ဆိုတာ အသက်၊ အချိန်ဆိုတာ ဘဝ။ ဒီတော့ ညီလေးရဲ့ ဘဝဟာ ပိုမိုလွတ်မြောက်လာမှာ၊ ညီလေးရဲ့ အချိန်၊ ညီလေးရဲ့ ဘဝဟာ ညီလေးရဲ့ လက်ထဲကို အပြည့်အဝ ရောက်လာမှာ အသေအချာပါ။ ဟင့်အင်း လို့ ပြောတတ်ခြင်းဖြင့် ညီလေးရဲ့ ပန်းတိုင်ကို လှမ်းကိုင်ဖို့ အချိန်တွေ၊ အင်အားတွေ ပိုလို့ရလာစေမှာပါ။ ညီလေးရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝ၊ ပြုမူဆောင်ရွက်ချက်တွေမှာ ပိုမိုလွှမ်းမိုးချယ်လှယ်ချုပ်ကိုင်နိုင်လာတာဟာ ငြင်းပယ်ခြင်းရဲ့ အလှတစ်ပါးပါ။ ငြင်းပယ်ခြင်းအားဖြင့် လက်ခံခြင်းရဲ့ တန်ဖိုးကို ပိုမိုမြင့်မားစေပါတယ်။ ဟင့်အင်း-လို့ ညီလေးငြင်းပယ်လိုက်ခြင်းဟာ ညီလေးကိုယ်တိုင်ချမှတ်လိုက်တဲ့ မဟာဗျူဟာအမြောက်ဆုံးသော ဆုံးဖြတ်ချက်ပါပဲ။
အဲဒီတော့ ကိုကြီးတို့ရဲ့ ရက်(၉၀)အဓိဋ္ဌာန်ကို လာမယ့် အောက်တိုဘာ (၃)ရက်၊ သောကြာနေ့မှာ စကြရအောင်။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 6:37 PM
ဒီကဏ္ဍအောက်မှာ ဖတ်အုံးမယ်ဆိုရင် မာရေးသျှင်, အရောင်စုံ အတွေးများ . . . . .
(ရက် ၉၀-အဓိဋ္ဌာန် ၊ ငြင်းပယ်ခြင်းရဲ့အလှ)
လောကမှာ အမှန်နဲ့ အမှားရှိ သလို အကောင်းနဲ့ အဆိုးလည်း ရှိတယ်မို့လား--
အမှန်တရား ကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး အမှားကို ဘူးခံငြင်း ပယ်ခြင်းဟာ----
ပန်းတိုင်အတွက်---ကြိုးစားနေခြင်း နည်းတနည်း ပဲလေ---
အဲဒီတော့ ရက် ၉၀ အဓိဋ္ဌာန်ဟာ အဓိပ္ပါယ်ရှိ
သော နေ့ များပါပဲ----
September 30, 2008 at 4:22 AM
September 30, 2008 at 7:31 PM
ညီလေးသို့ပေးစာ(ရက် ၉၀-အဓိဋ္ဌာန် ၊ ငြင်းပယ်ခြင်းရဲ့အလ...
Just Psychological Test for fun.
Researching the Research
smart answer is Submarine!
Professor! Ok, I got it.
အချစ် ၊ အလွမ်း များ
မတော်တဆကြုံကြိုက်တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခု၏ သက်တမ်း (သို့)...